लोकल तर बकेर्नो गोपी - मनोरञ्जन - नेपाल
लोकल तर बकेर्नो गोपी
फिल्म : गोपी | रेटिङ : २/५
समाजबाट पर–पर भागिरहेको छ नेपाली सिनेमा । बजारु सूत्रमा अल्झिएका र भाषाबाहेक नेपालीपन नभेटिने फिल्मकै बर्चस्व छ । र त, निर्माणको आधा शताब्दी नाघिसक्दा नेपाली फिल्मको मौलिक दृश्यभाषा निर्माण हुन सकेको छैन । सिनेमालाई मनोरञ्जनको सस्तो माध्यममै सीमित गर्न उद्यत छन्, अधिकांश फिल्मकर्मी । यही विडम्बनाबीच पनि हाम्रै परिवेशका कथा, पात्र र तिनका चालढाल बोकेर आक्कलझुक्कल फिल्म आउँछन् । दीपेन्द्र लामा निर्देशित दोस्रो फिल्म गोपी यसको उदाहरण हो । गाई पालेर देशमै उद्यम गरेका युवालाई मुख्य भूमिकामा उभ्याइनु आफैँमा सुखद हो । तर विषयले मात्र फिल्मलाई विशेष बनाउँदैन । कसिलो संरचना र सिर्जनशील दृश्य नहुँदा फिल्म फिक्का भइदिन्छ । गोपीको नियति यही हो । सामीप्यराज तिमिल्सिनालिखित पटकथामा अनेकौँ ‘अर्गानिक’ तत्त्व छन् तर पर्दामा सिलसिलेवर रुपमा बुन्न निर्देशक धेरै कोणबाट चुकेका छन् ।
अभिभावकको चाह छ, गोल्ड मेडलिस्ट छोरा अमेरिका जाओस् । तर सुधीर (विपिन कार्की) नेपालमै गाई फार्म चलाएर बसिरहेका छन् । कलेज पनि पढाउँछन्, विशेष लगावचाहिँ गाईमै छ । उनकी प्रेमिका सुजाता (सुरक्षा पन्त) लाई गाई पालेको फिटिक्कै मन परेको छैन । कृषकमैत्री बजार नहुँदा गाई फार्म बन्द हुन्छ । नयाँ फार्म खोल्न पैसा छैन । अब सुधीर स्वदेशमै केही गर्ने सपना तुहाएर विदेश जान्छन् कि यहीँ थप संघर्ष गर्छन् ? यसको जवाफ फिल्मले दिएको छ ।
नेपाली समाजको आदर्श पात्र हो सुधीर । उनका माध्यमबाट निर्देशकले विदेश जाने हुटहुटी बोकेको युवा पुस्तालाई पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्छन् । समाज परिवर्तनमा यसको भूमिका रहोस् भन्ने अभिप्राय: पनि देखिन्छ । फिल्ममेकरमा यति दायित्वबोध हुनु सराहनीय छ तर समाज वा अमुक समूहसँगभन्दा पहिले निर्देशक फिल्मसँगै जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यो भनेको, कलात्मक दृष्यभाषामार्फत उठान गरेको विषय सजीव ढंगबाट पस्कनु । यस मामलामा चाहिँ निर्देशक लामाको गाम्भीर्य देखिँदैन । सुधीरको चरित्र स्थापित गर्न कयौँ दृश्य खर्चिएको छ । तर गाईसँग उनको सामीप्यता महसुस हुँदैन । न सुधीरले कलेज पढाएका दृश्य स्वाभाविक छन्, न त त्यसले मूलकथालाई बलियो बनाउन कुनै भूमिका खेलेको छ । उनकी प्रेमिका, बाबु र फार्म पार्टनरसँगको सम्बन्धसमेत सतही लाग्छ । पटकथाको मागअनुरुप प्रभावशाली दृश्य खिच्न नसक्नु लामाको प्रधान कमजोरी हो । त्यसैले त पर्दामा घटना हुन्छ, दर्शकको आँखा डुल्छ तर मन तानिँदैन ।
मध्यान्तरसम्म सुधीरको आन्तरिक र पारिवारिक द्वन्द्व अनि दूधको उचित मूल्य नपाउँदा आइलागेको सकस देख्न पाइन्छ । यसलाई पनि लम्बेतान ढंगले देखाइएकाले दर्शकलाई बाँधिराख्न हम्मे पर्छ । भेटरिनरी डाक्टर उषा (वर्षा राउत) को आगमनपछि पनि कथाले रफ्तार लिँदैन । सुजाता र उषाको चरित्रचित्रण सपाट छ । उनीहरुको पृष्ठभूमि र बाह्य सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गरिएकाले दर्शकमा प्रेम जाग्दैन । उनीहरु आउँछन्, जान्छन्, बस् । अझ मामा (अंकित खड्का) को भूमिकाले मूलकथाको लय नै बिगारिदिन्छ । विश्वसनीय सिक्वेन्स सिर्जन नसक्दा उनीमार्फत केन्द्रीय द्वन्द्व पैदा गर्ने निर्देशक र पटकथाकारको प्रयास ‘फेल’ खाएको छ । गाई पाल्ने कृषकका यावत् समस्या देखाउन भने कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । गीत बजाएर गाई चिनेको अनि गाईको जन्मदिन मनाएको दृश्यले भावुक बनाउँछ ।
कथ्यसंरचना र शिल्पमा यावत् समस्याका बीच गोपीमा स्थानीयपनले आत्मीयता दिन्छ । क्लाइमेक्सतिर मामा दौडेकोबाहेक अन्य दृश्य बनावटी लाग्दैन, भलै ती मूर्त ढंगले नखिचिएको किन नहोस् । फिल्ममा त्यस्तो कुनै तफ्व छैन, जसलाई बजारलाई ध्यानमा राखी जर्बजस्ती थोपरिएको होस् । न आइटम वा रोटेपिङ घुमाएर नाच्ने गीत छ, न डाँडाकाँडा र हिमाल पुगेर रोमान्स गर्ने हिरो । न विनासन्दर्भ हुलिएका हास्य संवाद छन्, न त मारधड एक्सन । यस अर्थमा कथावाचनमा निर्देशकको इमानदारी देखिन्छ तर समस्या उही, कुशल प्रस्तुतिको अभाव ।
गोपी अपेक्षाकृत अब्बल नहुनुको अपजस निर्देशक लामापछि सिनेमाटोग्राफर शैलेन्द्र डी कार्कीलाई जान्छ । भाव अनुकुल दृश्य कैद गर्ने मिहिनेतीको छवि बनाएका कार्कीले यसपटक ‘खेलाँची’ गरेको देखिन्छ । निर्देशकको कमाण्ड कमजोर भएको मौकामा कार्कीले पनि बेवास्ता गरेको पो हो कि ! कारण जे होस्, कार्कीको खिचाइ फिल्मको वजन गिराउने मतियार बनेको छ । पृष्ठभूमि संगीत ठाउँ–ठाउँमा कर्कश लाग्छ । डबिङमा उस्तै हेलचेक्र्याइँ देखिन्छ ।
फरक र जीवन्त अभिनयबाट चिनिएका विपिन कार्कीले यसपटक पनि निराश बनाउँदैनन् । तर उनीसँगको अपेक्षा यही स्तरको अभिनय मात्र होइन । चरित्रमा दम नभए पनि सुरक्षाको अभिनय स्वाभाविक लाग्छ । वर्षाले चाहिँ चरित्रलाई आत्मसात् गरेकी छैनन् । मोटो चस्मा लगाउँदैमा डाक्टर मानिदिनुपर्ने जमाना गइसक्यो । भूमिका छोटो भए पनि भोलाराज सापकोटाले तारिफयोग्य काम गरेका छन् । अंकितको चरित्रजस्तै अभिनय पनि विश्वसनीय छैन । प्रकाश घिमिरे, सरोज अर्याल, हिउँबाला गौतम, कमलमणि नेपाललगायतका कलाकारले मन जित्छन् ।
‘लक्ष्मी कहिले काली...’ गीतले न्यारेटिभलाई सशक्त बनाउन सघाएको छ । ‘रोम–कम’ फिल्ममा रमाइरहेका पटकथाकार सामीप्यराज तिमिल्सिनाका लागि गोपी यादगार हुनसक्छ । उनले पात्र र घटनाअनुरुप बलिया संवाद सिर्जेका छन् । घामपानीमा अन्तरजातीय प्रेमकथा भनेर निर्देशक लामाले गतिलो आशा देखाएका थिए । तर ‘भिजुअल स्टोरी टेलर’ का रुपमा गोपीमा उनको परिपक्वता किञ्चित देखिँदैन । परम्परागत आँखाबाट हेर्दा नबिक्ने र ग्ल्यामरविहीन विषय रोजे, उनको प्रशंसा गर्नुपर्ने कारण यत्ति हो, अहिलेका लागि ।
गोपी लोकल गाई त हो तर लैनो होइन, बकेर्नो ।
ट्याग: फिल्मफिल्म समीक्षा